Telone - iAfrikan.com
Total Internet shutdown in Zimbabwe following #ShutdownZimbabwe protests
Zimbabwe's telecommunications companies ordered to completely shut down services or face imprisonment by government.
Zimbabwe is looking to capitalise on Artificial Intelligence (AI) solutions that are emerging and will roll out projects and programmes aimed at improving healthcare, education, access to finance through FinTech and agriculture. This comes after the Southern Afrikan country's government entered into an agreement with a Chinese company, CloudWalk Technology,
Over The Top (OTT) services are increasingly becoming the new battlefront for Zimbabwe's telecommunications companies as the country starts issuing broadcasting licences for webcasting, Voice on Demand and content distribution at a time when startups in digital media are recording rising viewership numbers. These developments are expected to take competition
Zimbabwe Watch - Technology innovators cash in but not all are happy
Innovation is the buzzword in Zimbabwe at the moment, with innovators, technology startups, and technology solutions developers increasingly being allocated resources, funding opportunities, and up-scaling prospects. However, some techprenuers are bitter with the large telecom companies for swooping on their ventures. Zimbabwe has joined other regional hubs that are fast